Imeko ezi-5 zomcimbi-iGeofumadas
NgoDisemba, 2009 ArcGIS-ESRI, egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Bahlobo abathandekayo, ndingathanda ukuwisa umbongo wabo bashukumisa umdla wam, kodwa iya kuba lolunye usuku. Okwangoku ukonwabela iholide oko i indleko, apha ezinye iinkcukacha ezingaphezulu.
Intombi yam yayinokuhamba ngebhayisikili yokuqala ngaphandle kweerhasi zokuxhasa ... kwaye ndilapho.
Indodana yam yayichithe isigamu somhla ekusebenziseni i-Wii fit, ndazama kodwa eso silwanyana sitsho ukuba ndidlulile iiplani ze-21.
Mna, nditya i-cambray tamales ukunambitha, i-turkey ebhaka kunye nesaladi yeetapile njengoko ndiyithandayo indilindele, kunye neapile. Mamela ezinye ii-cohetillos, kuba apha akukaliwa okwangoku kwaye ugcine indawo yokuba ngomso baya kwenza isuphu yokutya kwaselwandle kutata nenkosi yam.
Eminye, lala kude kube zi-9 ukuzalisa iiveki ezi-6 zivukile. Vuka ukuze ubone ukuba ekugqibeleni UFrancisco J wabuya iforamu yeGabriel Ortiz kwaye ujabulele i modem edibanisa nomqondiso osisiseko weselula.
I ukubabela Enye mkhulu ngenxa yoku ilizwe, ukudlala kancinane, ezama ArcGIS 9.3 kakhulu sixhasa ngamandla kule yokudlala.
Xa ndidlulayo ndikunqwenela iKrismesi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ekugqibeleni, ndikhululekile!
Post Next I-Aulasca, ezininzi izibonelelo ze-GIS zamahhalaOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-3 "Zintlanu zemicimbi"
Uxolo Ibingumfuziselo, kodwa ukuba ngaba le nto bayifunayo yithini lahlanu miba:
5. I-Condensate yeBose-Einstein
kwaye apha unako ukufunda okunye:
kufuneka banike iinkcukacha ezicacileyo
Yonke le nto ndiyiqondi nto